Warshad Isboortiga, Alaab-qeybiyeyaal - Soosaarayaasha Isku-dhejiska Shiinaha
Codsiga saldhigga jaakada: Waxaa loo adeegsadaa tuubooyin bir ah iyo iskudhafyo geedi socodka dhismaha si loo hagaajiyo dhererka jajabka iyo qaab dhismeedka dhuumaha, isku dheelitirka culeyska miisaanka, iyo rar qaadista. Waxaa inta badan loo isticmaalaa habka dhismaha ee shubista shubka dhismaha. Horumarka degdegga ah ee hantida maguurtada ah iyo gaadiidka saddex-geesoodka ah sanadihii la soo dhaafay, qadarka taageerada saqafka ayaa sidoo kale sameysay horumar deg deg ah. Kala soocida qalabka dhismaha: 1. Marka loo eego qaybta ...
1.Hordhaca Luowen HDG naqshadeynta qaab-dhismeedka waxaa lagu qiimeeyaa waajibaad culus (675 kg) wuxuuna ku habboon yahay dhammaan xirfadaha oo ay ka mid yihiin: Biriijleyaasha, duminta, nijaarrada, dhagxaanta dhagxaanta, kuwa birta wax ka sameeya iwm. waxay rabaan inay iibsadaan iskudhafka laftiisa isla markaana lacag badbaadiyaan. 2.Waa miisaan fudud - Aad u dhakhso badan u kacsan - Hal qof ayaa rakibi kara - Waa horay loo sii qorsheeyay! - Kuwaas oo dhammaantood kuu badbaadiya waqti iyo lacag. 3. Dhismayaasha lov ...
Iskuxidhka Xawaaladda Kwikstage
Iskudhafka Iskudubka Kwikstage Heer Kasta wuxuu leeyahay miiq 500mm halka 'V'-Pressings ay ku yaalliin xarumaha 495mm waxayna siiyaan dhibco goobta Ledgers iyo Transoms. Tayada Kwikstage waxaa loo soo saaray heerar caalami ah oo ka mid ah jawiga hubinta tayada leh ee ISO 9002 waana mid lagu shaabadeeyay nabadgelyada ujeedooyinka aqoonsiga iyo tayada. Fudud iyo Kharash Wax ku ool ah oo ka kooban kaliya 4 qaybood oo waaweyn, oo aan lahayn qalab rakiban, keydinta, gaadiidka iyo isu imaatinka 'Kwikstage' waa siyaado ...
1.Hordhaca Luowen Ring Lock Scaffolding waa nooc cusub oo xaraf ah, oo inta badan ka kooban saxanka Wicitaanka, istaandarka, buugaagta, dhejiska iyo qalabka, waa mid aad loogu soo dhaweynayo suuqa adduunka, sababtoo ah faa'iidooyinkiisa iyo codsi balaaran. 2.Feature 1. Qaab dhismeedka fudud: Qaybaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah istaandarka, buugaagta, way fududahay in la isu geeyo oo la kala furfuro, sidoo kale way fududahay keydinta, wareejinta iyo dayactirka. 2.Flexible ee dejinta: Waxaa jira 8 godad saxanka giraanta, sidaa darteed buugaagta iyo giraangiradu waxay galin karaan i ...
Hordhac ： Luowen CupLock Scaffolding waa nooc cusub oo iskuulada ah, waxaa cilmi baaris lagu sameeyay, la sameeyay oo la sameeyay iyadoo la tixraacayo tignoolajiyadda ajaanibta ah ee horumarsan ee wadajirka ah iyo kaabayaasha, kuna wanaagsan tayada iyo adeegsiga. 2.Feature structure 1. Qaab dhismeedka fudfudud: Qaybaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah istaandarka, buugaagta iyo dhejiska, way fududahay in la isu geeyo oo la kala furfuro, sidoo kale waa fududahay keydinta, wareejinta iyo dayactirka. Badbaadada iyo Joogtaynta: Koobku kor buu u leeyahay kala-soocidda iyo is-jiidashada, wuu is-xidhi karaa, ...
Culus Waajibaadka Isku-dhafka Ringlock, Kwikstage Qalabka Isboortiga, Iskeelka Iskeelka Isku-dhejiska ah ee Jack, Qaybo ka mid ah Isgoysyada Ringlock, Qaybta 'Ringlock Scaffolding Bracket', Iskuxidhka Birta Cuplock,